MAQAL: Udiyaar Garowga Xuska Maalmaha Xornimada Somaliyeed oo siweyn u socota – SBC
MAQAL: Udiyaar Garowga Xuska Maalmaha Xornimada Somaliyeed oo siweyn u socota
Magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo meelkasta oo ay dunida ka joogaan Umada Soomaaliyeed waxaa ka soconaya u diyaar garowga maalimaha xoriyada Soomaaliyeed ee nagu soo wajahan maalmaha soo socda.
Magaalooyin ay ugu horeyso Caasimada dalka ayaa waxaa laga dareemayaa dabaal degan waxaana uu yahay mid sareeya u diyaar garowga labada munaasabood ee kala ah 26da june iyo 1da Luulyo.
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa ka socda u diyaar garowga loogu jiro labadan munaasabadood sida uu ku soo waramayo wariyaah SBC ee magaaladaas.
DHAGEYSO Wariyaha SBC ee Quriceel warbixin uu diyaargarowgaas ka soo diray ..RIIX AMA DAAR
Kuma eka guriceel oo qura magaalooyinka gobolada dhexe iyo gobolada kale ee dalkaba waxaa iyana laga dareemayaa magalooyin kale oo waaweyn sidii loogu dabaal degi lahaa munaasabadahan mudan in la xuso.
Xukuumada Federaaliga ah ee iminka ka jirta Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday kulan ay yeesheen gudi u diyaargarowga arintan xooga saaraya kuwaa soo ay ku jiraan xubno sar sare.
Dareenka sanadan u dabaaldega maalmahan xuska mudan ayaa ah kuwo aad u sareeya, marka laga yimaado dalkana waxaa jira wadamo badan oo ku taala qaaradaha caalamka haba ugu badnaatee qaarada Yurub ee ay sida weyn u degen yihiin Umada Soomaaliyeed kuwaa soo ku jira u diyaar garowga u dabaaldega maalmahan.
Baraha bulshadu ku kulanto ayaa waxaa lagu arki karaa fariimo iyo calaamado la isugu balansanayo xaflado ay kala qeyb qaadan doonaan fanaaniin oo magaalooyinka wadamadaas ka dhici doona.
26ka June oo ay inaga xigto maalin qura waxa ay ku beegantahay Xornimadii gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed, sidoo kale waa maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed laga taago dhulweynaha Soomaaliyeed.
1da Luulyo waa maalintii ay xornimadooda qaateen gobolada Koonfureed ee dalka waana maalintii ay timid midnimadii umada Soomaaliyeed ee Afka Soomaaliga ah ku hadla meelkasta oo ay Joogaan, .
Waxay xiligani noqoneysaa waqtiga ugu wanaagsan ee maalmahaas muhiimada leh la xuso loona istaago weyneyn tooda maadaama umada Soomaaliya iminka mareyso heer ka wanaagsan sanado badan oo dowlad la’aan iyo burbur ay ku soo jirtay.